Nicotinamide Riboside Cas 1341-23-7 Qiime, Badeecad ka socota Bolise
[Molecular formular] C11H15N2O5 +
[Miisaanka jirka] 255.25
[Muuqaalka] Budada Cad ee loo yaqaan 'Cry Cryineine Powder'
Ku saabsan Nicotinamide Riboside
Nicotinamide Riboside waa maado dabiici ah oo laga helo caanaha. Xaqiiqdii waxay la xiriirtaa niacin iyo noocyo kale oo fiitamiin B3 ah.
Molikiyuulkani wuxuu noqday mid aad iyo aad u caan baxay maanta sababtoo ah daraasado cilmiya oo kala duwan oo cadeynaya awooda ay u leedahay inay ka hortagto buurnida iyadoo kaa caawineysa inaad la dagaallanto miisaanka oo kordha. Baarayaasha waxay ogaadeen in moleculekani uu u adeegi karo kaabis gaar ah oo kobcin doonta dheef-shiid kiimikaadka qofka si ay uga caawiso gubida kalooriyo badan iyo ka hortagga miisaanka oo kordha.
Marka laga reebo ka hortagga miisaanka oo kordha, waxay kaloo ka caawisaa kor u qaadista waxqabadka muruqyada, kordhinta kharashka tamarta, iyo yareynta waxyaabaha halista u ah cudurka macaanka.